🥇युक्तिहरू जसले तपाईंको जीवनलाई भान्सामा सजिलो बनाउँदछ
यदि तपाइँ हाम्रो शीर्ष " सब भन्दा अचम्मको खाना पकाउने तरिकाहरू " मा यहाँ रुचि राख्नुहुन्छ भने हामी जीवनभरका ती चीजहरू छोड्छौं जसले हामीलाई खाना पकाउन बढी समय खर्च गर्न अनुमति दिन्छ, यसलाई सानो विवरणमा नगुमाईकन, वा धेरै कम प्रयासको साथ। : हाम्रो " युक्तिहरू कि तपाईंको जीवन भान्सामा सजिलो बनाउँदछ "।
फैलिन रोक्न काठको चम्चा
तपाईंसँग भान्साको चीजमा केही उम्लिरहेको छ, तर त्यस समयमा तपाईंले तयार पार्नुभएको भुट्टीबाट हटाउनुपर्नेछ। कुनै समस्या छैन: तपाई प्यानमा काठको चम्चा राख्नुहुन्छ, जहाँ खाना उम्लिन्छ, र एक थोपा पनि खस्दैन।
बोतलहरू चिसो पार्न किचन कागज
भ्रमणहरू आइपुग्छन्। हामीसँग फ्रिजमा केही ताजा छैन। धेरै सजिलो: हामी बोतलहरूलाई भिजेको किचनको कागजमा बेर्छौं र फ्रिजरमा १ 15 मिनेटको लागि राख्छौं। यसै बीच, हामी पाहुनाहरूलाई कुराकानी दिन्छौं ... समस्या समाधान भयो!
प्याजको कारण नरोऊ
आँखा र आँसुको चुचुरो सहन सहन यो धेरै अप्रिय छ, जसले हामीलाई प्याज काट्न वा नक्काशी गर्न मद्दत गर्दछ। त्यहाँ दुई धेरै चाखलाग्दो चालहरू छन्: हामी पहिले प्याजलाई भिजाउँछौं वा साधारणतया, हामी एक चीचलो चबाउँदछौं।
माइक्रोवेभमा डिश तताउने
सबै क्षेत्रमा समान रूपमा न्यानो बनाउन बीचमा प्वाल छोड्नुहोस् जहाँ गर्मी बढी सजीलो हुन्छ।
चिसो सेतो वाइन आइस क्यूब बिना
यदि सेतो दाखमद्य पर्याप्त चिसो छैन भने, आइस क्युब्स नराख्नुहोस् जुन टुक्रिनेछ र पातलो हुँदा मद्यको राम्रो गुणस्तर बिगार्नेछ। फ्रिज गरिएको अpes्गुर छ, जसले एक ठाडो स्पर्श दिन्छ, र स्वाद परिवर्तन गर्दैन।
अधिक र अधिक खानाहरू साना फरक स्नैक्समा आधारित हुन्छन्, अधिक स्वादहरूको मजा लिन। र तिनीहरूलाई गर्ने एउटा तरिका भनेको कन्टेनरको रूपमा केही टार्टलेटहरूको केही आधारहरू प्रयोग गर्नु जुन हामी सँधै सुपरमार्केटमा फेला पार्दैनौं। हाम्रो समाधान: हामी आफैंलाई बनाउँदछौं, यदि हामी हिम्मत गर्छौं भने घरेलु पीठोको साथ, वा माफिनको मोल्डमा बेच्नेहरूको आटा पहिले नै बेचिएको छ भने उल्टो भयो।
स्ट्रबेरी सफा गर्नुहोस्
स्ट्रबेरी एक फल हो जसलाई हरियो पात र केन्द्र हटाएर सावधानीपूर्वक सफा गर्नुपर्दछ, त्यसैले तिनीहरूलाई गार्निश, केक वा फलफूलको सलादको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। शर्बत र थोरै सीपको परालको साथ हामी फलफूल नछोडी र छोटो समयमा धेरै नै सफा गर्छौं।
कम बार्बेक्यु सॉसर्स
आज हामीले बार्बेक्युको आयोजन गरेका छौं। हामीलाई विभिन्न प्रकारको मसला प्रदान गर्न पर्याप्त सस डु boats्गा चाहिन्छ ... कि होइन। केवल एक मफिन प्यान लिनुहोस् र यसलाई सॉसले भर्नुहोस्। थप रूपमा, यो एक मूल विचार हुनेछ!
मुटुको रूपमा हार्ड अण्डा
विशेष दिन? वा के तपाइँ केवल केहि राम्रो गर्न चाहानुहुन्छ? अण्डा पकाएपछि र यसलाई छोडेपछि, र यो अझै तातो हुँदा, तपाईं कडा कागज मोड्नुहुन्छ, बीचमा कडा-उमालेको अण्डा राख्नुहुन्छ, र फोटोमा देखाइएको जस्तो छडी। नतिजा: मुटु ...
फ्रिजमा कम ठाउँ लिदै
आज धेरै थोरैसँग गोदामहरू, वा पेय पदार्थहरूको लागि फ्रिजहरू छन्; हामी मध्ये धेरै सामान्य फ्रिजको लागि समाधान गर्छौं, जहाँ हामी सकेसम्म बढी ठाउँ बचाउने प्रयास गर्दछौं जुन हामी सकेसम्म फिट हुन्छौं। र यो विचार हो: बियरको छेउमा कागज क्लिप राख्नुहोस् जसले तिनीहरूलाई रोलि rol गर्नबाट रोक्दछ, र तिनीहरूलाई पिरामिडको फेदमा बदल्छ जुन न्यूनतम ठाउँ लिन्छ।
यी हाम्रो ट्रिकहरू हुन् जसले तपाईंको जीवन भान्साकोठामा सजिलो बनाउँदछ। हामीले यो बुझ्नुपर्दछ कि ती सरल छन्। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं तिनीहरूलाई उपयोगी पाउनुहुन्छ, र यदि तपाईंलाई उनीहरू मनपर्दछ भने हामी तपाईंलाई "मनपर्‍यो" वा टिप्पणीका लागि धन्यवाद दिन्छौं। र यो पनि सम्झनुहोस्, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, " सबै भन्दा अचम्मको कुकुर चाल "
चरित्र जसले संसारको इतिहास परिवर्तन गर्‍यो
सबै भन्दा राम्रो र सबैभन्दा मूल निद्रा आसन
महान निर्देशक जसले सिनेमा कहिल्यै अध्ययन गरेनन्
उचाइको डर बिना पेशेवरहरू